Cristiano Ronaldo oo dhigay rikoor cusub oo gooldhalinta Kooxda Juventus - Jowhar Somali Leader
Home Ciyaaraha Cristiano Ronaldo oo dhigay rikoor cusub oo gooldhalinta Kooxda Juventus
Xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa xalay sameeyey rikoodh kale oo dhinaca gool-dhalinta ah, kaddib markii uu kooxdiisa Juventus u saxeexay laba gool ciyaar ay Parma ku kala baxeen 2-1.
Ronaldo ayaa daqiiqaddii 43aad furay gool-dhalinta kulanka, waxaana uu mid labaad raaciyey daqiiqaddii 58aad inyar kaddib markii ay Parma la timid goolka madiga ah oo niyadda ay ku gashatay inay barbarro helayso.
Kulankan oo ka dhacay garoonka Allianz Stadium ee Juventus ayaa waxa Cristiano Ronaldo ay u ahayd ciyaartii toddobaad ee xidhiidh ah ee uu goolal ka dhaliyo horyaalka waddanka Talyaaniga ee Serie A, waxaanu sidaa ku diiwaangashaday rikoodh cajiib ah oo inuu yahay laacibkii ugu horreeyey ee Juventus ah ee shabaqa soo taabta toddoba kulan oo xidhiidh ah intii ka dambaysay December 2005. Ciyaartoygii ugu dambeeyey ee Juventus ah ee toddoba kulan oo Serie Ah goolal ka dhaliya waxa uu ahaa David Trezeguet.
Ronaldo waxa kale oo uu xalay sameeyey rikoodh kale oo layaab leh, waxaana uu tirada goolashiisa xili ciyaareedkan ee horyaalka ka dhigtay 16 gool, waxaana uu noqday laacibkii ugu horreeyey ee shanta horyaal ee waaweyn ka dhaliya ugu yaraan 15 gool muddo 14 xili ciyaareed oo xidhiidh ah.
Rikoodhka uu xalay Cristiano Ronaldo sameeyey kuma ekayn intan oo kaliya, hase yeeshee waxa uu noqday laacibkii shanaad ee Juventus ka tirsan ee 16 gool ka dhaliya 20-ka kulan ee ugu horreeya horyaalka, waxaana rikoodhkaas ugu horreeyey Omar Sivori oo sannadkii 1960-kii u dhaliyey Juventus 16 gool 20kii kulan ee ugu horreeyey horyaalka.
Laga soo bilaabo xilli ciyaareedkii 2006-07, laacibka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo waxa uu soo dhaliyey 414 gool oo uu usoo saxeexay kooxaha Manchester, Real Madrid iyo Juventus oo uu hadda fasal ciyaareedkiisii labaad la qaadanayo, taas oo uu xili ciyaareedkii hore u saxeexay 21 gool balse hadda uu u muuqdo inuu si fiican ula qabsanayo horyaalka Talyaaniga oo uu 16 gool dhaliyey 20 kulan gudahood.